DAAWO: 4 Arrimood oo Soomaalida laga qariyey kuna wajahan Dacwadda Badda Kenya & Soomaaliya.
October 18, 2019 Mahad Jama 0
MUQDISHO(P-TIMES) – Maxkamadda Caalamiga ah ee ICJ waxay markale daaha ka rogtay in dacwadda badda ee u dhaxeysa dalkeena Soomaaliya & Kenya, ay dib u dhigtay ilaa bartamaha sannadka nagu soo aadan ee 2020-ka, waxayna sheegtay in ay dacwaddan dib u dhigtay.
Si weyn ayaa loo falanqeynayaa go`aanka soo baxay, dad badana ayaana niyad-jab ka muujiyey goor horeba talaabooyinka ay gaartay Maxkamadda oo maalmo kahor warbaahinta Kenya, gaar ahaana Wargeyska The Star uu qorayey in dacwaddaas ay ku jiifto dalkooda Kenya.
Kenya waxay xaalka ka dhigtay carraabo fadhi baa quusiyay oo ugu damayn waxay ku guulaysatay in dhigeysiga dacwada badda ee u dhaxeysa Somalia iyo Kenya mar kale dib loogu riiixo ilaa June 8- 12, 2020.
Sababta Kenya ay ugu guulaysatay inay markale maxkamaddu ka aqbasho dib u dhiga dhegaysiga dacwadda iyada ooo maalma ka hor maxkamaddu mudaysay dhegaysiga dacwadda wax badan lagama oga , balse waxay u badantahay laba sababood midkood:
1- In ay Kenya taageero xoogan ka heshay dawlado waawayn oo dunida ah , gaar ahaan Maraykanka iyo wadamada kale ee reer Galbeedka , sidaasna maxkamadda cadaadis loo saaray , oo aan la tixgelin dalabka Soomaaliya ee ahaa inaan mar dame la dhib dhigin dhegaysiga dacwadda.
2- In Kenya, iyada oo adeegsanaysa saaxiibadeeda Reer Galbeedka , ay dhanka Soomaalida ogolaansho ka heshay ku aadan dib u dhiga dhegaysiga oo wax la qarinayo.
HALKAAN KA DAAWO FALANQEYN
3- Qareennada: Qareennadan oo kala ah: Paul Riichler, Prof. Philippe Sands iyo Prof. Alain Pellet waxaa ay aad uga liitaan, kana khibrad yar yihiin kuwii dalkeenna matalayey kolkii hore, Villa Somalia mar aan weydiiney “Lacag ayaa loo waayey kuwii hore oo mushaarkooda ayaa badnaa” ayey jawaabteeda noqotay. Qareennadan cusub waa dad lagu raacay raqiis, waxayna ku guuldareysteen in ICJ tusaan sida Kenya aaney daacad uga aheyn dacwada ama ay u yastaba howlaha socda, haddii aan la badalinna waxaa ay khatar geli karaan kiiska oo dhan.
4- Siyaasadda: Kenya diblomaasiyad ahaan waa ka awood badan tahay Soomaaliya, Midowga Afrika ilaa xogheyaha Qaramada Midoobey waxay ku qanciyeen in Soomaaliya laga dhameeyo wada hadal, waxaa intaas dheer dadka arrintan lugta kula jiro oo dhammaantood khubaro ah halka Soomaaliya dhankeeda ay siyaasad ahaan hor socdaan Mahdi Khadar ra’isul wasaare ku xigeenka Soomaaliya iyo Safiirkeenna Midowga Yurub Cali Saciid Fiqi, ninka hore diblomaasiyad albaabkeeda ma gelin halka Fiqi uu jilicsan yahay.
Bangiga Horumarinta Afrika oo jawaab adag usoo diray Madaxweyne Deni, ka dib codsi u diray.